Fanampiana hialana amin’ny fanampiana… | NewsMada
Par Taratra sur 17/03/2017
Fitenenana nalaza tamin’ny Repoblika II ny hoe fanampiana hialana amin’ny fanampiana. Mby aiza? Hatramin’izao, ny eo ihany no eo. Miharatsy andro aman’alina aza… Tsy afa-bela amin’ny fangatahana fanampiana any ivelany ny fitondram-panjakana isaky ny mihetsika. Mandra-pahoviana?
Inona no ampahatsiahivana sy itanisana ny lasa amin’izao? Mangataka fanampiana ho an’i Madagasikara amin’ireo firenena any ivelany indray izao ny fitondram-panjakana noho ny takaitra navelan’ny rivodoza Enawo. Tsy misy mangataka voan-tehamaina; fa rehefa tsy mahazo, ny loha no lanjaina?
Manankarena i Madagasikara; fa ny vahoaka, mahantra. Izay no mampihazakazaka ny vahiny eto? Na i Madagasikara, na ny vahoaka malagasy… Ny tsy mangataka aza, omeny. Doniny tapany, handoa erany. Mitohy hatrany ny fangatahana fanampiana. Mandra-pahoviana? Na tsy misy eritreritra hiala amin’izany…
Tsy misy politika mazava sy matotra hialana amin’ny fanampiana lava? Na hanao izany aza, mbola hangataka fanampiana amin’ny hoe manampahaizana sy teknisianina vahiny amin’ny fanaovana fivoriana atrikasa, ohatra. Toy ny hoe tsy mety na heverina ho tsy marina sy tsy misy lanja izay atao, raha tsy eo ny vahiny.
Na inona na inona atao, angatahina fanampiana: famaritana politika na tanjona amin’itsy na iroa, famolavolana na fanatsarana lalàna, fandrafetana tetikasa amin’izatsy na izaroa, fananganan-javatra… Miankina amin’izay no hahazoana fanampiana, tsy mahafa-bela amin’ny fangatahan-dava.
Rahoviana vao ho tanteraka ny fanampiana hialana amin’ny fanampiana? Rehefa tsy kepohina na ahodinkodina amin-javatra hafa ny fanampiana. Hananganan-javatra maharitra toy ny fahazoana mitrandraka ny harena eto an-toerana tsy hianteherana amin’ny vahiny, ohatra; hamoronana asa sy tetikasa vaovao…
Mba araka izay tena ilaina izany: fanampiana ihany, fa tsy inona. Toy ny trosa: tsy loharanon-karena, fa vonjy aina sy enti-miainga ihany. Ny fiharian’ny tena no tena foto-karena. Ho sahy amin’izany ve ny mpitondra? Maka ny fankatoavana sy ny fanampian’ny vahoaka eto an-toerana, fa tsy ny any ivelany…